फोटो क्रेडिट: UVM OSCR समुदाय गठबन्धन र ISGOOD
समर्थन र उत्तरदायित्वका सर्कलहरू
CoSA एक reentry कार्यक्रम हो एक सफल अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्स्थापना न्याय मोडलको आधारमा गम्भीर अपराधीहरुलाई तिनीहरूको समुदायमा पुन: एकीकृत गर्न सहयोग पुर्‍याउने। प्रशिक्षित CoSA स्वयंसेवकहरू to देखि of समूहको टोलीमा काम गर्छन् र समुदायमा फर्कने र दैनिक जीवनको प्रबन्ध गर्न उनीहरूलाई सहयोग गर्न कोर सदस्यसँग साप्ताहिक भेट गर्दछन्। यसले समावेश गर्दछ:
सुधार विभाग द्वारा निर्धारित सुपरिवेक्षण नियमहरु पछी।
अरूलाई चोट नपुर्‍याउने तरिकामा कार्य गर्ने।
विगतका अपराधहरूका लागि संशोधन गरेर कसैको कार्यको लागि जिम्मेवारी लिने।
मानसिक वा भावनात्मक समस्याहरू जस्तै लत, उदासीनता, वा अपा learning्ग अशक्तताहरूको लागि मद्दत प्राप्त गर्दै।
उत्पादक नयाँ दृष्टिकोण र व्यवहार अभ्यास।
यातायात आवश्यकताको लागि व्यवस्था गर्दै।
बजेट भित्र सिर्जना गर्ने र बस्ने।
समस्याहरूको रचनात्मक समाधान विकास गर्दै।
भविष्यको लागि योजना गर्दै।
CoSA को उद्देश्य भनेको समुदायको सफलतापूर्वक समुदायमा पुन: सामेल हुन र कुनै अपराध गर्न नसक्ने कोर सदस्यहरूलाई सहयोग गरी सामुदायिक सुरक्षा र मर्मत सम्बन्ध बढाउनु हो। CoSA सर्कलले कोर सदस्यलाई उपचारबाट सिक्ने र आत्म जागरूकता लिन र यसलाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, सर्कलले मुख्य सदस्यलाई जवाफदेही समात्नेछ-पोस्ट-रिलीज अपेक्षाहरूको पालनाको लागि र स्वस्थ सम्बन्ध विकास गर्न। जब कोर सदस्य बढ्छ र सामुदायिक सम्पर्कको पुनर्निर्माण गर्दछ, सर्कलले समुदायको आवश्यकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ कोर सदस्यको सम्बन्धमा।
अधिक जान्नको लागि (2०२) 4019०-१-17१ or वा srecicar@burlingtonvt.gov मा स्टुअर्ट रिकर सम्पर्क गर्नुहोस्।
हामीलाई हाम्रो "समुदाय" राख्न मद्दत गर्नुहोस्
सामुदायिक न्याय केन्द्र!
हालका स्वयम्सेवक अवसरहरूको लागि तल हेर्नुहोस्:
के तपाई बर्लिtonटनमा इक्विटी र न्याय ल्याउन मद्दत गर्न हप्तामा दुई घण्टा बाँच्न सक्नुहुन्छ?
हामी तपाईंलाई एक जिम्मेवार पार्टी (अपराधी) र प्रभावित पक्ष (पीडित) को परिप्रेक्ष्यबाट अपराधको प्रभाव सम्बोधन गर्न साथी समुदायका सदस्य हुन आमन्त्रित गर्दछौं। यस समूहले व्यक्ति र समुदायलाई गरेको क्षतिहरूको अन्वेषण गर्नेछ र जिम्मेवार पार्टीलाई संशोधन गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी विशेष गरी हाम्रो समुदायको विविधता (उमेर, जाति, लि gender्ग पहिचान, धर्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, आदि) प्रतिनिधित्व गर्न को लागी इच्छुक छौं।
हाम्रो प्रक्रियामा १/२ घण्टा स्वयम्सेवक अभिमुखीकरण, लिखित आवेदन, अन्तर्वार्ता, सन्दर्भ र पृष्ठभूमि जाँच, दायित्व माफी, गोपनीयता सम्झौता, र गहन, १२ घण्टा पुन: स्थापना अभ्यासहरू समावेश छन्। कृपया अभिविन्यासको लागि साइन अप गर्न (2०२) 656565-7१55 वा rjolly@burlingtonvt.gov मा राहेल जोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मार्फत पीडितलाई सहयोग गर्नुहोस्
वस्तु वा सेवाहरूको दान
अपराधको पीडितहरूका लागि समानान्तर न्याय सदैव दान गरिएको सेवाहरू (मसाज, घर सफा गर्ने, मोटर वाहन मर्मत गर्ने, आदि ...) वा चोरी गरिएको सामानहरूको प्रतिस्थापनको लागि आभारी छ। अधिक जान्न किम जोर्डन (2०२) २44-०764 or वा kjordan@burlingtonvt.gov मा सम्पर्क गर्नुहोस्।